Shirkii 1-aad ee Madasha Badbaado Qaran oo furmay | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkii 1-aad ee Madasha Badbaado Qaran oo furmay
Guddoomiyaha Madasha Badbaado Qaran Senator Cabdi Xaashi ayaa ku dhawaaqay in shirkii koowaad ee Madasha uu maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa soo gabagaboobay Shirkii koowaad ee Madasha Badbaado Qaran oo Muqdisho lagu qabtay markii ugu horreysay tan iyo goortii lagu dhawaaqay Madasha dabayaaqadii toddobaadkii hore.
Guddoomiyaha Madasha Mudane Cabdi Xaashi oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in kulankii Madasha ee ugu horreeyay uu qabsoomay maanta, waxa uuna sheegay in ay sii socon doonaan kulamada ay yeelanayaan xubnaha Madasha inta laga helayo dowlad lawada leeyahay, waa sida uu hadalka u dhigaye.
"Dalkeenu wuxuu ku jiraa dhib, waxaan muddo dheer la isku haystaa oo cakiran, doorasho loo siman yahay oo lawada leeyahay dalkan sidii looga qaban lahaa" ayuu yiri Guddoomiye Cabdi Xaashi oo ka hadlayay. Waxa uu sheegay in Madasha ay isku taagtay badbaadinta qaranka Soomaaliyeed iyo sidii looga saari lahaa xaaladdan murugsan ee uu dalku ku jiro.
Waxa uu tilmaamay in amni xumo awgeed aan Muqdisho iyo Afgooye loo kala safri karin in diyaarad la qaato maahane, "Waxaan u baahanahay in aynu tashano, la heshiiyo, la wada hadlo, dalkana laga badbaadiyo dhibaatada taagan ee ku raagtay, dalkeena abaaro ayaa jira iyo cudurkan Covid-19 ayaa jira, haddii aynaan dowlad loo dhan yahay oo heshiis lagu wada yahay aynaan dhisan dhibaato kama baxeeno" ayuu yiri guddoomiye Cabdi Xaashi.
Shirarka madasha waxa uu sheegay in ay socon doonaan ilaa inta laga gaarayo in ay Soomaali waxay heshiis kuwada taay ay gaarto, waana Badbaado dalka Soomaaliyeed sida uu guddoomiyuhu sheegay.